အရေးပါသောအဆဲလ် Softgels - Bhmed
Nutraceutical Anti-အိုမင်း Softgels
သင့်ရဲ့အသားအရေတိုးတက်ကောင်းမွန်သော softgel ဆေးလုံး: ငါတို့သည်သင်တို့စဉ်းစားနေတဲ့အဘယ်အရာကိုသိသလော ဒါဟာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းသောအသံ။ Bhmed Nutraceutical Anti-အိုမင်း Softgels ကွဲပြားခြားနားပါသည်။
ပထမဦးစွာကျနော်တို့ဂရုတစိုက်သင့်ရဲ့အသားအရေဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်မြှင့်တင်ပေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အရေးပါသောအဆဲလ်သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်, အပြစ်ကင်းစင်စွာအတူတကွအလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုရွေးပါ။ Next ကိုကျနော်တို့အများဆုံးဇီဝရရှိနိုင်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများကို process အအေး။ အပူတို့ကဖကျြဆီးခံရအံ့သောငှါနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအဆောက်အဦများ - အာဟာရ, အင်ဇိုင်းတွေ anti-inflammatory မော်လီကျူး, hyaluronic acid ကို, ကော်လာဂျင်, elastin, Anti-၎င်းသည်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ပေါင်းများ, lipids, အမိုင်နိုအက်ဆစ်နှင့် peptides အပါအဝင် - ကရေတွက်ဘယ်မှာထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏နေကြသည်။ အဆိုပါရလဒ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လုံးတိုးတက်လာသောကျန်းမာနှင့်အတူသင့်ရဲ့အသားအရေများအတွက်အစွမ်းထက်ဆန့်ကျင်အိုမင်းကုထုံးဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ဆောင်နေဆဲ 100% အေး
သဘာဝ Enzymatic ဖျက်ခြင်း
အဆင့်မြင့် Ultrafiltration BSiDB (TM)
Compartmentalized အရည်ကြည်ဖု Coating
30 softgels ၏ package
အရေးပါသောအဆဲလ် Softgels ထုတ်ကုန်များ
သိုးချင်းနှင့်ငါးအလွန်အမင်း bioactive ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏တစ်ဦးတည်းပိုင်ရောစပ်မှုနှင့်အတူပရီမီယံ Extract စျေးကွက်အပေါ်အများဆုံးအဆင့်မြင့်ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပကုထုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား nutraceutical Anti-အိုမင်း softgels သင်နှင့်သင့်ချစ်ရသူတစ်ဦးအငယ်နှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းပုံပန်းသဏ္ဌာန်များကိုနိုင်ကြသည်။
ကယေဘုယျ detoxification အဘို့သို့မဟုတ်အားလုံးကိုအစိမ်းရောင်မယ် Be, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပရီမီယံအထူးသဖြင့်သင့်ရဲ့အသားအရေမှသဘာဝအလင်းရောင် restore ပြန်သင်ကျန်းမာရေးနှင့်တက်ကြွတစ်လုံးဝအတွေ့အကြုံသစ်ကိုဆောင် ခဲ့. မည်! သတ်သတ်လွတ်နှင့် 100% phyto-ပါဝင်ပစ္စည်းများအပေါ်အခြေခံပြီး, ဒီ nutraceutical Anti-အိုမင်းကုသမှုချောမွေ့ခြင်းနှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းအသားအရေမြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
ဇိမ်ခံ caviar ကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူ
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမွေး Sturgeon ငါးရင်းမြစ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆဲလ်-based ရိတ်သိမ်းဇီဝနည်းပညာအဏ္ဏဝါ DNA ကိုနဂိုအတိုင်းဖြစ်ပြီးအလွန်အမင်း bioactive ဖြစ်နေဆဲသေချာ။ သည်အခြားအအေးလုပ်ငန်းများ၌ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူပေါင်းလိုက်သော, ဒီအဏ္ဏဝါ Anti-အိုမင်းကုထုံးရှေ့ဆက်အိုမင်းမှုနဲ့တစ်သျှူး / ဆဲလ်ပျက်စီးမှုနေဖို့သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
STATE-of-the-အေအာရ်တီဆေး ENZYMATIC Digest
ကျွန်ုပ်တို့၏ပါဝင်ပစ္စည်းများအစွန်းရောက်အပူများအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲပရိုတိန်းနှင့်ပရိုတိန်း၏အမျိုးမျိုးသောအုပ်စုခွဲထုတ်ကုန်များ Hydrolysis catalyses တစ် proteolytic enzymatic အစာခြေမှတဆင့်လုပ်ငန်းများ၌နေကြသည်။ အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသေး peptides သေချာ, 10 နာရီထက် ပို. များအတွက်အထူးကြားနေ protease နှင့်အတူ 24 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်လျော့နည်း၏အပူချိန်မှာပြုသောအမှုသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်ထိန်းသိမ်းထားကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ filtration ဖြစ်စဉ်ကိုအလွန်သေးငယ်တဲ့အမှုန်များနှင့်ဖျက်သိမ်းမော်လီကျူးများခွဲထုတ်, မျိုးစုံ filtering ကိုအမြှေးပါးကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပါဝင်ပစ္စည်းများ 10kDa မော်လီကျူးအလေးချိန် (လျော့နည်းနှစ်ခု nanometers ၏ခန့် Stokes အချင်းဝက်) ကို ultrafiltrated နေကြသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးပရိုတိန်းနှင့်ဆယ်လူလာပစ္စည်းထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်အများဆုံးစုပ်ယူဘို့ nanoparticles လျှော့ချဖြစ်ကြောင်းသေချာ။ Ultrafiltration မှ <2nm လည်းမဆိုဘက်တီးရီးယား / ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်အခြားအညစ်အကြေးများ၏စုစုပေါင်းဖယ်ရှားရေးအတွက်ရလဒ်များ။
BSIDB ™ Bio-Blend
BSiDB ™ - Bio-စုပေါင်း Integrated Dovetail Blending system ကိုရွေးချယ်ထားပါဝင်ပစ္စည်းများအကြားတစ်ဦး '' binding စုံလင်သောသဟဇာတ '၌ရလဒ်များကြောင့်သိပ္ပံပညာရှင်များကတီထွင်တဲ့စီးပွားဖြစ်ထူးခြားတဲ့မော်လီကျူး blending နှင့်ချုံ့ဇီဝနည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ bioavailability ဆက်ပြီးစဉ်ပိုမိုမြင့်မားထိရောက်မှုနှင့်ကိုက်ညီ blending အရည်အသွေးကိုကမ်းလှမ်းကြောင်းချုံ့နည်းပညာနှင့်အတူ ultra-high ညှပ် macromixers ၏မျိုးစုံခြေလှမ်းများပါဝငျသညျ။